Somaliya oo lagu tilmaamay dalka Adduunka ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka madaxa looga jiro. | raascasayrmedia.com
← Ethiopia oo soo Fara Gelisay Khilaafkii Ahlu-Suna Ka Dhex Jiray (Faahfaahinta Shir ka Dhacay Addis Ababa)
Labada Shariif oo kulankoodii sedaxaad isku mari waayay →
May 21, 2011 · 2:13 pm
Somaliya oo lagu tilmaamay dalka Adduunka ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka madaxa looga jiro.
Warbixin ay soo saartay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku tilmaantay Somaliya in saddexdii qof ee Somali ah uu midkood qabo cudurka dhimirka, tiradaas oo ka dhigaysa in ay somaliya tahay dalka ugu badan adduunka ee ay ku nool yihiin dadka xannuunadda wallida qaba.
Dr. Rizwan Hamayun oo qoray warbixintan ayaa sheegay marka ay dadku shaqo waayaan, hoy la’aanina ay ku dhacdo amase hantidoodii lunto ay lasoo deristo walbahaar iyo feker keeni karta in uu isku dayo qofko in uu is dilo, taas oo ka jirta somaliya.
Warbixintan ayaa sheegaysa in madfac amase hoobiye marka uu dul maro dad shacaba amase uu ku soo dhaco uu dhaliyo argagax iyo in dadku maskax ahaan is beddelaan oo ay cudurka waalidu ku dhacdo.
Dalka Somaliya oo labaatankii sano ee ugu dambeeyey ay dagaalo ka socdeen ayaa inta badan dadka madaxa looga jiraa waxaa loo tirinayaa in ay yihiin dad ehelkoodii lagu hordilay amase lagu faraxumeeyey.
Sidoo kale waxaa la sheegay in hanjabaadaha la isu mariyo telefoonada Gacanta ee ku saabsan in la dili doono oo ay adeegsadaan in ta badan kooxa islaamiyiinta ee ka dagaalamaya koonfurta Somaliya ay sii kordhisay cudurka waalida ee ka jira Somaliya.
Ibrahim Nuradin oo gadi jiray kararka telefoonada, rootida iyo alaabooyin yar-yar oo ay macaamiil u ahaayeen askarta dawladda ayaa telefoonkiisa gacanta loo soo mariyey farriin muujinaysa in la dilidoono, hanjabaadaasina waxa ay dhaxalsiisay in muddo sannad ah ay qoyskiisu ku xiraan gurigooda markii uu madaxa ka jirraday, isaga oo akhirkii la keenay meelaha lagu daweeyo dadka madaxa ka xannuunsan.
Somaliya aad ayeey ugu yar yihiin cusbutaalada gaarka ah ee lagu daweeyo dadka qaba cudurrada dhimirka, haddii ayba jiraan meelaha qaarkood waxaanba joogiin amase jirin takhaatiirta aqoonta u leh daweynta cudurada maskaxda ku dhaca.